Ṅomie Jizọs n’Otú O Si Merie Ọnwụnwa | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 4:1-11 MAK 1:12, 13 LUK 4:1-13
SETAN ANWAA JIZỌS ỌNWỤNWA
Ozugbo Jọn mechara Jizọs baptizim, mmụọ nsọ Chineke duuru Jizọs gaa n’ala ịkpa dị na Judia. O nwere ọtụtụ ihe ọ ga-echebara echiche. Mgbe e mere Jizọs baptizim, “eluigwe meghere.” (Matiu 3:16) Ọ bụ ya mere o ji nwee ike icheta ihe ndị ọ mụtara na ihe ndị o mere mgbe ọ nọ n’eluigwe. N’eziokwu, Jizọs nwere ọtụtụ ihe ọ ga-atụgharị n’uche.
Jizọs nọrọ ụbọchị iri anọ n’ala ịkpa ahụ, ehihie na abalị. N’oge ahụ niile, o righị ihe ọ bụla. Mgbe ezigbo agụụ jidere ya, Setan bụ́ Ekwensu bịara ịnwa ya ọnwụnwa. Ọ sịrị ya: “Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, gwa nkume ndị a ka ha ghọọ achịcha.” (Matiu 4:3) Ma, Jizọs ekweghị ka Ekwensu nwata ya n’ihi na ọ ma na ọ dịghị mma ya iji ike ọrụ ebube o nwere meere onwe ya ihe ndị na-agụ ya.
Ma, Ekwensu akwụsịghị ịnwa ya. Ọ gbalịrị isi ụzọ ọzọ nwata Jizọs. Ọ gwara Jizọs ka o si n’elu ụlọ nsọ wụda. Ma, Jizọs ekweghịkwa ka ọ nwata ya ka ya gosi na ya nwere ikike pụrụ iche. Jizọs gwara ya ihe e dere n’Akwụkwọ Nsọ nke gosiri na ọ dị njọ isi otú a nwalee Chineke.
N’ọnwụnwa nke atọ, Ekwensu nwere otú o si gosi Jizọs “alaeze niile nke ụwa na ebube ha” ma gwa ya, sị: “Ihe a niile ka m ga-enye gị ma ọ bụrụ na ị daa n’ala fee m ofufe.” Ọzọkwa, Jizọs ekweghị ka a nwata ya. Ọ sịrị ya: “Si ebe a pụọ, Setan!” (Matiu 4:8-10) Jizọs ekweghị ka a nwata ya ife Setan ofufe n’ihi na ọ ma na ọ bụ naanị Jehova ka e kwesịrị ife ofufe. N’eziokwu, o kpebiri ịnọsi ike na-erubere Chineke isi.
E nwere ihe ndị anyị nwere ike ịmụta n’ọnwụnwa ndị a a nwara Jizọs nakwa n’ihe o mere mgbe a nwara ya. A nwara Jizọs ọnwụnwa n’eziokwu. Ọnwụnwa a a nwara ya na-egosikwa na Ekwensu abụghị ihe ọjọọ nkịtị, dị ka ụfọdụ ndị na-ekwu. Ọ bụ onye dị adị a na-adịghị ahụ anya. Ihe a Baịbụl kwuru na-egosikwa na ọ bụ Ekwensu nwe ọchịchị niile nke ụwa a. Ọ bụkwa ya na-achị ụwa a. Á sị na ọ bụghị ya, olee otú nkwa ahụ o kwere inye Kraịst alaeze niile nke ụwa ga-esi bụrụ ọnwụnwa?
Ihe ọzọ bụ na Ekwensu kwuru na o nwere ihe ya ga-enye Jizọs ma o fee ya ofufe naanị otu ugboro. Ọ gwadịrị ya na ya ga-enye ya alaeze niile nke ụwa. Ekwensu nwekwara ike ịgbalị iji ihe yiri ihe a nwaa anyị. O nwere ike iji ihe ndị nwere ike ime ka mmadụ baa ọgaranya n’ụwa a, ma ọ bụ nweta ọkwá, chọọ ịnwata anyị. Anyị ga-egosi na anyị maara ihe ma anyị mee ka Jizọs ma rubere Chineke isi n’agbanyeghị ụdị ọnwụnwa ọ bụla bịaara anyị. Ma, cheta na ihe Ekwensu mere bụ naanị ịhapụ Jizọs “ruo oge ọzọ ga-adaba adaba.” (Luk 4:13) O nwekwara ike ime anyị otú ahụ. N’ihi ya, anyị kwesịrị ịnọ na nche mgbe ọ bụla.
Olee ihe ndị ọ ga-abụ na Jizọs nọ na-atụgharị n’uche n’ụbọchị iri anọ ahụ ọ nọrọ n’ala ịkpa?
Olee ụzọ dị iche iche Ekwensu si gbalịa ịnwata Jizọs?
Olee ihe anyị nwere ike ịmụta n’ọnwụnwa ndị ahụ a nwara Jizọs nakwa n’ihe o mere mgbe a nwara ya?
Onye ọ bụla kwesịrị ịna-ezere ọnwụnwa. Gụọ ihe isii ga-enyere gị aka ịma otú ị ga-esi na-ezere ọnwụnwa.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Mụta Ihe n’Ihe Jizọs Mere Mgbe A Nwara Ya Ọnwụnwa
jy isi 13 p. 36-37